Imbeko V20: amanqaku aphambili avuza kwi-intanethi emva kokuqinisekiswa | I-Androidsis
Iimpawu eziphambili ezivuzayo kunye neenkcukacha zeHloniphe i-V20, iflegi yeflegi elandelayo
I-smartphone entsha engaqondakaliyo yozuko ivele kwi-Intanethi. I-smartphone evela kwi-Honor, uphawu oluphambili lwe-Huawei kwi-intanethi, ineendlela ezininzi zoyilo ezinomdla ezichasene nolwalathiso ngokubanzi kwezinye izixhobo.
Le fowuni, esithetha ngayo, ayisiyiyo eyenye eyindlalifa eyaziwayo ye Imbeko V10, i Imbeko V20Isiphelo sendlela esele sifumene i-3C kunye ne-CMIIT (iSebe lase-China loShishino kunye neTekhnoloji yoLwazi). Oku kubhalisiwe phantsi kweekhowudi zemodeli 'iHuawei VCE-AL00' kunye ne 'Huawei VCE-TL00', ifumene ukukhanya okuluhlaza kwaba baphathi babini.
Into enomdla kukuba, isiqinisekiso se-3C se-Honor V20 siza kuphela kwiintsuku emva kokuba i-Honor View 20 ibonwe kwiwebhusayithi ye-EEC phantsi kwenombolo yemodeli 'PCT-L29'. Siyakholelwa ukuba esi sixhobo seNhlonipho sitsha Uyakubhaptizwa uMboniso oHloniphekileyo 20.
Khumbula ukuba i-Honor V10 ikhutshwe ngeli xesha kunyaka ophelileyo. Ke, ukuba iingxelo zichanekile, iHonor V20 ingamiselwa kungekudala, kwiintsuku nje ezimbalwa okanye iiveki. Makhe sijonge kwinkcazo, amanqaku kunye nezinye izinto ezibalulekileyo ze-Honor smartphone evuzayo.
1 Ukujonga imbeko 20: Ukucaciswa kobuchwephesha kunye neempawu eziVuzisiweyo ukuza kuthi ga ngoku
2 Ixabiso elinokubakho kunye nokufumaneka kwesixhobo
Ukujonga imbeko 20: Ukucaciswa kobuchwephesha kunye neempawu eziVuzisiweyo ukuza kuthi ga ngoku
Ngokutsho amarhe, i-Honor V20 ithatha indlela yesiko kunye nolondolozo ngakumbi Ngaphezu kokukhethwa yiHloniphe kwii-smartphones zayo zamva nje. Kutshanje kukhutshwe Hlonipha iMicrosoft 2 Inendlela yokuhambisa yekhamera yangaphambili, into enika umoya omtsha kwisiphelo sayo. Indlela yokusebenza iluncedo ekwandiseni iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba ngokushenxisa imfuno yenotshi, into iinkampani ezininzi ezikhethileyo, ngaphandle kweSamsung.
Nangona kunjalo, kwi-Honor V20, Inkampani ibuyela kwiziseko kwaye inamathela kuyilo olulula. Isiphelo sendlela yokusebenza okuphezulu, esingachazwanga, siyakudlala inotshi yokulahla amanzi ephezulu eyokuhlala kuphela kwekhamera yangaphambili. Ayisixeleli ukuba ukhetho loyilo luyafana ncam ne Imbeko 8X kunye 8X Max, isibini eshukumayo esungulwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ukongeza, i-Honor V20 iya kubonisa isikrini se-IPS LCD. Ubungakanani besikrini abaziwa, kodwa sicinga ukuba iNhlonipho iya kugcina isisombululo se-FullHD + kunye nomlinganiselo ophezulu.
Njenge entsha Umlingani 20 nabazana nabo IHuawei P20, i-Honor V20 iya kuba neseti yekhamera kathathu ngasemva. Iya kuba nesikena seminwe esiqhelekileyo, eyayiza kufumaneka kufutshane neenzwa zokufota.
Nangona iinkcukacha ezichaziweyo zingekaphumi, enye ingxelo ngesixhobo ibonisa ukuba iHonor View 20 inokubandakanya ukuseta kwekhamera kathathu njengoHloniphe uMlingo 2. Ngamanye amagama, i-smartphone inokuba nekhamera ye-16MP + 24MP + 16MP.
Into enomdla malunga neRumor V20 enerumored kukukwazi ukutshaja ngokukhawuleza. Ibhetri ye-Honor V20 inokuxhasa itshaja ye-22.5 W ekhawulezayo yokutshaja. Umthamo webhetri awukaziwa, kodwa unikwe ukufana okuninzi kwi-Honor Magic 2, i-Honor V20 inokuba nebhetri ye-3.500 mAh okanye enye efanayo.
Enye into yokuqaqambisa kukuba Isixhobo siya kubandakanya esamva Iprosesa ye-HiSilicon Kirin 980 evela eHuawei, I-SoC eziqhayisa ngokuba ne-NPU ezimbini. Ukuxhasa i-SoC, isixhobo se-Honor sinokuba ne-6 GB okanye i-8 GB yememori ye-RAM ngaphakathi kunye nenkumbulo ephezulu yangaphakathi.
Ixabiso elinokubakho kunye nokufumaneka kwesixhobo
Ngokomthombo, Inkampani ikwinqanaba lokugqibela lophuhliso lwe-Honor V20 kwaye inokuyivula kule nyanga. Njengokwesiqhelo, iNhlonipho yayiza kuvula isixhobo kuqala e-China, kodwa kufuneka izise esi sixhobo e-Indiya nakwilizwe lonke laseYurophu.
I-Honor V10 yasungulwa ngexabiso lokuqala le-2.699 yuan (340 euros approx.). Amaxabiso ayesebenza ngokwahluka kwe-4GB / 64GB. Umahluko we-6GB / 128GB waboniswa malunga ne-2.999 yuan (approx. 380 euro). Njengokuqikelela, i-V20 inokuxabisa ngaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu eziphambili ezivuzayo kunye neenkcukacha zeHloniphe i-V20, iflegi yeflegi elandelayo
Thatha ithuba lokubonelela nge-Honor kwaye ufumane iifowuni eziphathwayo nge-1 euro kuphela
Gcwalisa ibhotile yakho yasimahla nge-Tap: usetyenziso lwentsusa kakhulu ukunciphisa ukusetyenziswa kweplastiki